Isku day wararka ku saabsan Diiwaanka Google ee Pixel 5 mobilkaaga | Androidsis
Haddii in yar ka hor adiga waxaan fursad u helnay inaan helno 'wallpaper-ka nool' ee Pixel 5, hadda waa Diiwaanka Google 2.0 daqiiqad ayaa si toos ah looga soo saaray isla mobilka si aan ugu heli karno qalab kasta oo Android ah.
In kasta oo ay qasab tahay in sidaas la dhaho maahan in qof kastaa uu ku raaxeysan doono Rikoodhyahan Google, iyo in waxku yahay waxoogaa nasiib ah. Taasi waa, waad ku rakibi kartaa Galaxy Note 9 ama xitaa Nokia halka mid kale uu noqon doono wax aan macquul aheyn. Marka waa waqtigii la isku dayi lahaa.
1 Nooca ugu dambeeyay ee gacantaada ku jira
2 Sida loo helo Samsung Recorder 2.0 taleefankaaga gacanta
Nooca ugu dambeeyay ee gacantaada ku jira
Diiwaanka Google 2.0 ayaa imanaya leh horumarin muhiim ah sida 'Smart Scroll' si toos ah looga helo ereyadaas muhiimka ah qoraalka maqalka, oo laga dhigo kuwo lagu muujiyo baarka wareega si looga caawiyo isticmaalaha inuu si toos ah ugu aado qayb.
Astaamaha kale ee cusub ayaa ah awooda lagu tafatiri cajaladaha maqalka ah marka aad tafatirka qoraalka, Abuur cajalado fiidiyow oo gaagaaban oo laga duubay cajalado keyd ah oo la wadaago si dhakhso leh, iyo taageeridda qoraalka sixitaanka Dhammaan wararkaasi waxay yimaadeen Diiwaanka Google ee loogu talagalay Pixel 2.0a 4G iyo Pixel 5. Taasi waa, inta kale ee Pixel-ka xitaa ma aysan awoodin inay xitaa isku dayaan qaniinyada astaamahan cusub iyo inay iyaga u gaar ahaaneed iyaga.
Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah in markale aan ku raaxeysan karno taas nooc cusub oo loogu mahadcelinayo ragga ku jira XDA Developers iyo inay ku guuleysteen inay soo saaraan APK si xitaa mobilada aan Pixel-ka aheyn ay ugu raaxeysan karaan duubista Google. Waa in la sheegaa inaan wajaheyno barnaamij xilligan noogu adeegaya Ingiriisiga halka aan rajeyneyno in mar uun ay ku shaqeyn doonto Isbaanish.
Kuwa aan aqoon shaqada dhabta ah ee Diiwaanka Google ama Diiwaanka Google, awooddooda ugu weyn waa awood codka kuqor waqtiga saxda ah wax kasta oo loo malaynayo. Xilligan la joogo waa Ingiriisi, laakiin waxaa la rajeynayaa in lagu sameyn karo Isbaanish.
Sida loo helo Samsung Recorder 2.0 taleefankaaga gacanta
Waxaan layaabnay APKkan ka shaqeeya qaar ka mid ah taleefannada aan Pixel-ka ahayn, sidaa darteed, sidaan soo sheegnay, waa arrin tijaabo ah si loo arko haddii kuweena ay noo ogolaadaan inaan ku raaxeysano. Taasi waxay tidhi, kuwa haysta Pixel ka hor 4a ama 5, oo leh APK-kan ayaa awoodi doona inay ku raaxaystaan ​​Diiwaanka Google 2.0 dhib la'aan. Waxaad kala soo bixi kartaa APK-ka hoose:
Diiwaanka Google 2.0 APK: Download
Waa inaan isticmaal barnaamijkan hoosta si aad ugu rakibto APK meesha aan ka soo dejisannay:
Kala Qaybi Qalabka APKs (SAI)
Developer: polychromatic Firefox
Ka dib markii aan rakibnay barnaamijkan ugu dambeeyay, oo u adeegta sidii rakibayaal apk ah oo loogu talagalay moobiilkeenna Android, waa inaan helnaa meesha aan ka soo dejisannay APK-ka Diiwaanka Google ama Diiwaanka Google. Waxaan ka arki doonaa ikhtiyaarka hoosta barnaamijka. Dhowr ilbiriqsi ka dib waxaan noqon karnaa ka hor rakibaadda ee APK iyo sidaan soo sheegnay, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, iyo Pixel 4 APKkaan waxaa loo adeegsaday inuu lahaado Diiwaanka Google.
Laga soo xigtay ra'yi uruurinta ay soosaari jireen horumariyeyaasha XDA naftooda, Samsung Galaxy Z Fold 2, Microsoft Surface Duo, LG V40 ThinQ, iyo LG Velvet Waxay awoodeen inay isku dayaan qaniinyada APKkan haddii kale aan macquul ahayn in la isticmaalo; tan iyo xilligan waxay u gaar tahay Pixels.
Laga soo bilaabo wixii aan awoodnay inaan ka akhrisano faallooyinka, sidoo kale waxay u shaqaysaa qaar ka mid ah Nokia, Galaxy Note 9, Galaxy A50, Galaxy S10 (Android 10) iyo Huawei Mate Pro 10. Marka noocyada moobiillada iyo noocyada leh suurtagalnimada in la isku dayo codsigan Google markii ugu horreysay ayaa furmaya.
Marka khadadkaas waxaan ku talinaynaa fiiri Diiwaanka Google ee 2.0 si loo ogaado waxa ay tahay in la helo qoraalkaas waqtiga dhabta ah ee aan markaa u isticmaali karno waxyaabahayaga u gaarka ah si aan ugu soo dhigno shabakadaha bulshada iyo in ka badan. Ha ka maqnaan waraaqaha rasmiga ah ee Pixel 5.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kala soo bax Google Recorder 2.0 Pixel 5 taleefan kasta oo Android ah
OnePlus 8T wuxuu marayaa tijaabo adag oo ku saabsan xoog iyo adkaysi